cyber မှာသုံးတဲ့ ဆော့၀ဲလ် လိုချင်ပါတယ်... — MYSTERY ZILLION
cyber မှာသုံးတဲ့ ဆော့၀ဲလ် လိုချင်ပါတယ်...
June 2008 edited July 2008 in File Request
ဆိုက်ဖာ မှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ ဆော့၀ဲလ် လိုချင်ပါတယ်..ဥပမာ user တစ်ယောက်က စပြီးသုံးပြီဆိုတာနဲ့ ဘယ်အချိန်ကနေ စပြီးသုံး တယ် ...ပိုက်ဆံ ကဘယ်လောက်ကြသလဲ...စသဖြင့်ပေါ့...အဲဒီလို ဆော့၀ဲလ်လေး လိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
Handy Cafe Software ပါ သူကအလကားသုံးလို့ရတယ်..ဒါပေမယ့် client မှာ..ကြော်ငြာတော့နဲနဲများတယ်..
သွားပြီးဒေါင်းလော့လုပ်ယူရပါတယ်..ပြီးရင် register လုပ်ဖို့တော့လိုမယ်.. သူက register လုပ်မှ ကိုယ့်အီမေးဆီကို key ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်.. ကိုယ် register လုပ်တဲ့အခါ client ဘယ်နှစ်လုံးသုံးမယ်ဆိုတာ တစ်ခါတည်း ရွေးပေးရမယ်..
ကြော်ငြာတော့များတယ်ဗျ.. သုံးရတာ.. အဲဒီတစ်ခုတော့စိတ်နဲနဲနောက်တယ်ဗျာ.
နောက်တစ်ခုက Cafezee ဆိုတဲ့ဆော့၀ဲလေးပါ..သူကတော့အလကားမရဘူးး မြန်မာပြည်က CD ဆိုင်တွေမှာလိုက်၀ယ်တာတောင်မရှီဘူးဗျ..
အစ်ကို တို့ပြောတဲ့ ဆော့၀ဲလ်လေးနဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဗျာ...ကျေးဇူးအထူး...
I cannot open that site you refer. Could you pls check the spelling.
ကိုအိုင်းစတိုင်းရေ ကိုဒီဘီအေ ပြောတာ ဒီလင့်ခ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျ။
file not found တဲ့...ဘယ်မှာလဲကျာ.....
saihtet85 wrote: »
Cyber software တွေကို မြန်မာကရေးထားတာတွေရှိပါတယ်..
ကိုယ့်ဆီမှတော့ သုံးနေတယ်.. ဒါပေမဲ့ပေးဖို့မသင့်လို့ ၀ယ်ပြီးသုံးပါကွာ
စမ်းသပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ အခမဲ့ပေးပါမယ်.. ချစ်သော iceos
အဲ့ဒါတွေကို စိတ်တိုင်း မကျနိုင်သေးတာပဲ ချက်တယ် ကို iceos ရယ်.. :2:
ကို icefirester ရေ
ညီတို့ကို share ပါဦး
ကျနော် Anyplace Control ကိုရှာနေတာတော်တော်ကြာပြီ ။
ကျနော်မှာ Anyplace Control က Trial Version ဖြစ်နေတယ်ဗျာ ။
အဲဒါ Full Version လေးလိုချင်လို့ ဖြစ်နိုင်ရင်ကူရှာပေးကြပါလားဗျာ ။
shinnaymin88 wrote: »
I want to suggest you to post asanew post.
အကိုက လက်၇ိှသုံးနေတာဆိုတော့ Anyplace Control
ဆောလ်ဝဲက ဘယ်နေရာမှာ ဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတာ
ဘာအတွက်သုံးရမလဲဆိုတောမသိတော့ အလကားလို သုံးလို့ မရဖြစ်နေလိုပါခင်ဗျာ
kyawswar83 wrote: »
kyawswar83 ရေ အောက်က site မှာလေ့လာကြည့်လိုက်ပါလား။
ကို exiter ရေရဘူးဗျ
သူက firefox documet ပဲရတယ်ဗျ။
exe ဟုတ်ဘူး ။
ဒီ Link ကဆိုမရလို့ပါ ။
ကိုကျော်စွာရေ Anyplace ကမိုက်တယ်ဗျ။
သူက server ကနေ client တွေကိုထိန်းလို့ရတယ်ဗျ။
ကျနော် fri နဲ့ က internet shop ကို open ထားတာဗျ။
အဲဒါ Customer တွေထဲမှာတော်တော်များများကဘာညာဘာညာ ကြည့်ကြတယ် ။
အဲဒါဆိုမိန်းကလေးတွေကြိုက်ဘူးဗျ။အဆိုးဆုံးကကျနော့် fri တွေဗျ။
ုAnyplace Control က ပထမဆုံးအနေနဲ့ စက်တိုင်းမှာလိုက် Run ရမယ်။
Run ရင် သိတိထားရမှာက Server လား Client လားရွေးရမယ် ။
Client ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Server ပဲဖြစ်ဖြစ် Password ပေးရမယ်။
ပြီးရင် Server မှာ Add Computer မှာ Click နှိပ်ပြီး Client Ip Address ကိုထည့်
ဒါဆိုကိုထိန်းချင်တဲ့ Computer ကို Server ကနေလှန်းထိန်းလို့ရပြီ။
သတိ။ ။ Server ကော Client ကော ၂ ခုလုံးစက်တိုင်း Run မိရင် အကုန်းလုံးကနေထိန်းလို့ရနေမယ် ။
Server ကို တလုံးပဲ Run ပါ။
Client ကို Join လို့ Password တောင်းရင် Client မှာထည့်ခဲ့တဲ့ Password ကိုပေးပါ။
အဆင်ပြေပါစေ ။ :101::101::101:
Server လား Client ဆိုတာဘယ်နေရာမှာရွေးတာလဲမသိဘူးအကို
Anyplace ကို Install စလုပ်ရင်သတိထားကြည့်ပါ။
အဆင်မပြေရင်အခု [email protected] ကို Invite လုပ်လိုက်ပါ။
Team Viewer ဆိုတာလဲ အဲဒီလိုမျိုး သုံးတာပဲမဟုတ်လားဗျ ...
အဲဒီ နေရာ မှာ သွားကြည့်ပါလားဗျာ ...
၁၀ လုံးပဲပေးသုံးတယ် ဘာလို့လဲပြောကျပါအုံး
ကို Inlaythar ရေ ဘယ်လိုရသွားတာလဲ နဲနဲလောက်ပေး:((
(10)လုပ်လို့ရတယ်ဗျ ဒေါင်းလို့ကတော့ရတယ်ဗျ ဒါပေမဲ့ (၁၀)ပဲဖြစ်နေလို့
ကို အင်းလေးသားရေ ဘယ်လိုရသွားတာလဲ ပြောပါအုံး
(၁၀)ပဲပေးသုံးနေလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပို့တော့ရေတာဘာလို့ဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး
ကိုအင်းလေးသားရေ Reply လေးကိုစောက်နေမယ်နော်